ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ Ar-Tရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး - Cele Gabar
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ Ar-Tရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ပရိသတ်ကြီးရေ Ar-Tကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၆)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော်Ar-Tရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ။
Ar-Tရဲ့ ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးအတွက်ကို ပရိသတ်တွေရော ချစ်ရတဲ့ အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေကလည်းမွေးနေ့ဆုတောင်းတွေအသီးသီးတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့အထဲမှာ ပရိသတ်အချစ်တော် အဆိုတော် မင်းသမီးချောလေး ဝါဆိုမိုးဦးကလည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝါဆိုမိုးဦးကတော့ “Happy birthday my lovely ko gyi. Wish u all the best . Miss u so much “ဆိုပြီး နှစ်ယောက်တူတူရိုက်ကူးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း Ar-T ရဲ့ မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Source – Warso Mow Oo
ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ Ar-Tရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး
ပရိသတ္ႀကီးေရ Ar-Tကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ဧၿပီလ (၂၆)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္Ar-Tရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ။
Ar-Tရဲ႕ ဒီေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးအတြက္ကို ပရိသတ္ေတြေရာ ခ်စ္ရတဲ့ အႏုပညာရွင္ေမာင္ႏွမေတြကလည္းေမြးေန႔ဆုေတာင္းေတြအသီးသီးေတာင္းေပးေနၾကပါတယ္။ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးၾကတဲ့အထဲမွာ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ အဆိုေတာ္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ဝါဆိုမိုးဦးကလည္း အပါအဝင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဝါဆိုမိုးဦးကေတာ့ “Happy birthday my lovely ko gyi. Wish u all the best . Miss u so much “ဆိုျပီး နွစ္ေယာက္တူတူရိုက္ကူးထားခဲ့ဖူးတဲ့ ပံုေလးေတြနဲ႕ေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေတြလည္း Ar-T ရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post မွေးနေ့ကုသိုလ်အဖြစ် ကိုသားကြီး (ဒွေး)ကို ရည်စူးကာ အဟာရဒါနအလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အရှင်ဇောတိက တဖြစ်လဲ သရုပ်ဆောင် ဇွဲနိုင်ဝင်း
Next post သူနဲ့ သူ့ရဲ့သားတွေသမီးတွေရဲ့ မနက်ခင်းမှာ ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ